KASHIFAAD: Guddoome Taabit oo Shirkad Gaara ku wareejiyay Gaadiid & Warshado Turkigu siiyay G/Banaadir – Kismaayo24 News Agency
KASHIFAAD: Guddoome Taabit oo Shirkad Gaara ku wareejiyay Gaadiid & Warshado Turkigu siiyay G/Banaadir
by nairobi 9th July 2017 9th July 2017 068
Guddoomiyaha Gobolka banaadir Taabit Cabdi Axmed ayaa Gaadiidka iyo Qalab loogu deeqay Maamulka Gobolka Banaadir ku wareejiyay shirkad gaar ah.
Wararka la ogaaday ayaa sheegaya in Taabith uu heshiis qarsoodi ah la galay shirkad lagu magacaabo Kulmiye, taasoo uu ku wareejiyay Gaadiid dhisme ku dhow 50 iyo Warshado ay Hay’adda Bisha Cas ee Turkiga siisay Maamulka Gobolka Banadir.
Heshiiska oo aan wax tartan ah loo gelin, isla markaana ahaa mid aan loo soo bandhigin warbaahgnta iyo hay’adaha dowladda ee ku shaqada leh qandaraasyad ayaa la sheegay imn shirkadda Kulmiye ay ku shaqeysan doonto Qalabkan iyadoo maamulka Gobolka Banaadir laga siinayo khidmad joogto ah.
Gudoomiyaha shirkadda Kulmiye Cabdulqaadir Abuukar Cumar Cadaan oo hore gacan-saar ula lahaa maamulka Gobolka banaadir, isla markaana dhisay qaar ka mida Wadooyinka Muqdisho ayaa ku guuleystay inuu Taabit Cabdi Maxamed heshiis qarsoodi ah la galo oo lagu wareejo Gaadiidka waaweyn ee dhismaha iyo Warshad casri ah oo sameysa alaabaha dhismaha.
Shirkado waaweyn oo dhinaca dhismaha qaabilsan ayaa daneynayay Qalabkan haddiiba maamulka Gobolka Banaadir uukireynayo ama la iibinayo, laakiin wuxuu heshiiska oo dhan ku dhacay si hoose.
Sababta keentay in Gaadiidka iyo Qalabka la siiyay Maamulka Gobolka Banadir lagu wareejiyo shirkad ganacsi ayaa lagu sheegay in G/Banaadir aanu heyn karin qalabkaasi, waxayna arrimahan oo dhami dhacayaan iyadoo gobolku baahi badan u qabo gaadiidka oo hore u qeyb weyn uga ahaa nadaafadda magaalada Muqdisho.
Guddoomiye Taabit oo xilka hay bilooyin kooban, kana mida saaxiibta ugu dhow madaxweyne Farmaajo ayaa ku socda wadaddii guddoomiyeyaashii ka horeeyay isagoo durba ku dhaqaaqay tallaabooyin dhowr ah musuqmaasuq aanu ka marneyn, kuwaasoo qaarkood aan dhowaan idin soo bandhigi doonno.
Sh. Nuur Baaruud iyo Gen. Jaamac Maxamed Qaalib oo xilal loomagacaabay iyo Shaki kayimid magacaabidooda.
Daawo Sawirada R/Wasaare Khayre “Calanku ma taagnaan karo oo cirka kama babban karo haddaanu ciidan ku tiirsanayn”.
Dhagayso +Sawiro:- Fah Faahin Ciidamada Puntland oo soo qabtay Rag Al-Shabaab kuwa kalana Meyd kusoo qabtay
Dhagayso:- Xildhibaan Juurille oo si kulul ula hadlay Shacabka magaalada Boosaaso